FileSonic,Hotfile,Wupload,Rapidshare တို့က ဖိုင်တွေ ဒေါင်းဖို့ Premium Accounts မရှိလို့ စိတ်ညစ်နေလား...??? ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Saturday, December 03, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 18 comments
အသုံးပြုပုံ။ ။ အပေါ်က ပေးထားတဲ့ လင့်ခ် ကိုနှိပ်လိုက်လို့ ရောက်ပြီဆိုရင်
Date အရင်ဆုံး ကိုကြည့်ပါ....အောက်ကပုံလေးလိုပေါ့ဗျာ...
ဒီ အသုံးပြုပုံ လေးကတော့ မသိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ် ခင်မျာ....အားလုံး.... Premium Account တွေကိုယ်စီသုံးလို့ လိုချင်တာတွေ အချိန်မကုန်စေပဲ တဝ ကြီး ဒေါင်း (Down) နိုင်ကြပါစေ....
13 February 2012 at 01:14 Reply
16 April 2012 at 18:42 Reply
16 April 2012 at 20:02 Reply
7 May 2012 at 21:32 Reply
16 December 2012 at 14:18 Reply
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုရေ... ကျွန်တော် Website ကလေးကိုလည်း လာလည်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်..
ဒီ Post ကလေးကိုလည်း ကျွန်တော် ကြိုက်လို့ ကူး ယူသွားပါတယ်...အဆင်သင့်လျှင် ကျွန်တော် Website ကလေးမှာ ပြန်ဖော်ပြခွင့်ပြုစေချင်ပါတယ်။
18 February 2013 at 14:46 Reply
Note of MIne says:
1 March 2013 at 16:27 Reply
3 March 2013 at 14:22 Reply
25 March 2013 at 11:24 Reply
7 April 2013 at 21:11 Reply
1 June 2013 at 18:41 Reply
အစ်ကို blog not foundြ​ဖ​စ်ေ​န​ပါ​တ​ယ်။
Arntmyo Zaw says:
6 June 2013 at 02:18 Reply
P. M. Verma says:
19 August 2013 at 14:39 Reply
Is there any other way to haveapremium account?
ye maung says:
7 November 2013 at 13:20 Reply
1 January 2014 at 19:02 Reply
de post tin ta` ako gmail link lay ti chin par tal ma ti tar shi yin tin u chin lo par :D
plz thz u
1 January 2014 at 19:03 Reply
4 February 2014 at 05:53 Reply
21 June 2014 at 14:01 Reply
အကိုပေးထားတဲ့လင့်ကို နှိပ်တာ အပြာဆိုဒ် တခုကိုရောက်သွားတယ်။